Diyaarada Yemen Airways oo duulimaad ka bilaabi doonta magaalada Muqdisho – idalenews.com
Diyaarada Yemen Airways ayaa markii u horeysay duulimaad ka bilaabi doonta magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya, kadib markii Mas’uuliyiin ka socota diyaarada ay soo gaareen magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiinta Shirkada diyaaradaha Yemen Airways ayaa shalay la kulmay Wasiirka Warfaafinta, Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka C/llaahi Ciilmooge Xirsi, iyagoo ka wada hadlay sidii diyaarada duulimaad joogta ah ugu bilaabi laheyd magaalada Muqdisho.
Wasiirka Warfaafinta, boostada, Isgaarsiinta iyo gaadiidka C/llaahi Ciilmooge ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan in diyaarada Yemen Airways ay ka howl bilowday Soomaaliya, isagoo xusay in dowladda ay wado dadaalo sidii diyaaradaha caalamiga uga howl geli lahaayeen Soomaaliya.
Muxsin Cali Xaydar oo ka mid ah Mas’uuliyiinta Diyaarada Yemen Airways ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha Muqdisho ay ku arkeen howl wanaagsan oo ka socota, isagoo xusay in dhowaan diyaaradooda ay bilaabi doonto duulimaadkeeda u horeeyay oo Muqdisho ah.
Diyaarada Yemen Airways ayaa hadii ay duulimaad ka bilowdo magaalada Muqdisho ayaa waxay ku soo biireysa diyaaradaha caalamiga ee Soomaaliya duulimaadka ka bilaabay muddo 20-sano ah, iyadoo diyaarada kaliya ee caalami ay xilligan tahay Diyaarada Turkish Airways oo sanad ka hor bilowday duulimaad Muqdisho iyo Istanbul oo toos ah.
Dhowaan ayay Shirkada Qadar Airways oo ka mid ah diyaaradaha ugu caalamisan caalamka ay ku dhawaaqday inay duulimaad ka bilaabi doonto magaalada Muqdisho, iyadoo tallaabada duulimaadyada caalamiga loo arko mid wax ka bedeleysa mustaqbalka Soomaaliya.
Isticmaalka Mootooyinka oo ku soo badanaya magaalada Jowhar